ကိုရီးယား တော့ပူကီ | Wutyee Food House
ဟင်းသီး ဟင်းရွက် အခေါ်အဝေါ်များ
Wutyee Food House ပုံရိပ်များ
Wutyee Food House
Yummy Myanmar, Asian and European food recipes…
« တို့ဟူးနွေး (၃ယောက်စာ)
ထိုင်းစတိုင် ပြည်ကြီငါးသုတ် »
September 5, 2011 by chowutyee ကိုရီးယား တော့ပူကီ
တော့ပူကီသည် ရေပန်းစားဆုံး ကိုရီးယားဟင်းလျာတွေထဲမှာ တမျိုးအပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်မှုန့်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ တော့ပူကီကို ကိုရီယားရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွဲ တော်တော်များများမှာ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ သို့ပေမယ့် ကိုရီးယားမှာပဲ ၀ယ်လို့ရတဲ့ ဆန်ကိတ်တွေကို ကိုယ်တိုင် အိမ်မှာ လုပ်စားနိုင်ဖုိ့ ရည်ရွယ်ပြီ ၀တ်ရည် အဆင့်ဆင့် လုပ်ပြပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ရတာလည်း ထင်သလို မခက်ပဲ၊ အလွယ်တကူ လုပ်စားနိုင်မှာပါ။ အရသာကလည်း ချိုစပ်လေးနှင့် အလွန်မှ စားလို့ကောင်းပါတယ်။ လုပ်နည်းလေးကို ကြည့်ကြည့်ရအောင်…
ဆန်မှုန့် (rice flour) ♦ ၃၀၀ ဂရမ်
ဆား (salt) ♦ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ရေ (water) ♦ ဆန်ချိန်ခွက် ၁ခွက်
ဆန်ကိတ် (rice cake) ♦ ၃၀၀ ဂရမ်
ကိုရီးယား ငရုတ်သီးအနှစ် (hot pepper paste) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ဇွန်း
ငရုတ်သီးမှုန့် (hot pepper flake) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ငါးအသားပြား (fish cake) ♦ ၅ပြား ( ၁လက်မအရွယ်လေးများ လှီးပေးပါ)
သကြား (sugar) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ရေ (water) ♦ ဆန်ချိန်ခွက် ၄ခွက်
ငါးခြောက်သေး (anchovies) ♦ ရကောင်
ကြက်သွန်မြိတ် (spring onion) ♦ ၁စည်း (အရှည်အစောင်းလှီးပေးပါ)
၁။ အရင်ဆုံး ဇလုံထဲသို့ ဆန်မှုန့်၊ ဆားများ ရောထည့်ပြီ မွှေလိုက်ပါ။
၂။ ပြီလျှင် ရေကို နည်းနည်းချင်း ထည့်ပြီ ဆန့်ကိတ် မပေါ့မမာ အနေထားရောက်သည်အထိ သမအောင် လက်ဖြင့် ရောနုယ်ပေးပါ။
မှတ်ချက် ။ ။ ဆန်ကိတ် ပျှော့သွားလျှင် ဆန်မှုန့်လိုက်ပေးပြီ မာသွားလျှင် ရေအနည်းငယ် ထပ်ထည့်ပေးပါ။
၃။ ဆန်ကိတ်များ ရပြီဆိုလျှင် အလုံးလေးများ လုံးပြီ ပုံတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း အချောင်းရှည်လေးများ ရအောင် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အသာလေး လိပ်လေးပါ။
၄။ အချောင်းရှည်များ လိပ်ပြီလျှင် ပေါင်းအိုးထဲ ထည့်၍ ၄၅မိနစ်ခန့် မီးများများဖြင့် ပေါင်းထားပေးပါ။
၅။ ထို့နောက် ပေါင်းအိုးထဲမှ ပြန်ဖယ်ပြီ ၁လက်မအရွယ်လေးများ ပိုင်းထားပေးပါ။
၁။ ပထမဆုံး ဒယ်အိုးတစ်ခုထဲသို့ ရေ(၄ခွက်) ထည့်ပြီ ဆူလာလျှင် ငါးခြောက်လေးများ ထည့်ပေးပြီ ၁၀မိနစ်ခန့် တည်ထားပေးပါ။
၂။ ပြီမှ ထိုငါးခြောက်များကို ပြန်ဖယ်ထားလိုက်ပါ။
၃။ ထို့နောက် ဒယ်ထဲသို့ (ဆန်ကိတ်၊ ငရုတ်သီးအနှစ်၊ သကြား၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ ငါးအသားပြား၊ ကြက်သွန်မြိတ်) တို့ကို ထည့်ပေးပါ။
၄။ ပြီနောက် ငါးခြောက်တည်ထားသော အရည်များကို လောင်းထည့်ကာ ရောမွှေပြီ မီးအသင့်တင့်ဖြင့် အရည်အနည်းငယ် ကျန်သည်အထိ တည်ထားပေးပါ။
၅။ ရပြီဆိုလျှင် ပန်းကန်ထဲ ပြောင်းထည့်ကာ တော့ပူကီကို ပူပူလေး စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
Tips: အသားထည့်စားချင်သူများ အမဲသား(သို့) ၀က်သား ကြိုက်နှစ်ရာကို နှုတ်နှုတ်စဉ်း၊ ဆားထည့် ဆီဖြင့် ကြော်ကာ တော့ပူကီဖြင့် ရောစားနိုင်ပါသည်။
Posted in ကိုရီယားချက်ပြုတ်နည်း | 31 Comments	31 Responses
on September 5, 2011 at 5:39 am | Reply Sandakuu
စိတ်ဝင်စားတယ်… ဒီမှာတော့ ဆိုင်မှာ အဖြူလေးတွေရောင်းတာရှိတယ်..
ကိုယ်တိုင်တော့ မလုပ်နိုင်ပေမယ့် လုပ်ပြီးသားဝယ်ချက်ရင်တော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်.
on September 7, 2011 at 4:24 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ ဆန်ကိတ်လေးတွေ readymade ၀ယ်လို့ရရင် ပိုလွယ်တာပေါ့… အားရင် လုပ်စားကြည့်ပါ..😀
on September 5, 2011 at 8:01 am | Reply hanlay
စားကောင်းမဲ့ပုံပါဘဲ အရမ်းကြီးတော့မကြိုက်ဘူး တခြားအစားအစာတွေကို အများကြီးချက်ပေးနော် ကျေးဇူးနော်အမ
on September 7, 2011 at 4:22 am | Reply chowutyee
on September 6, 2011 at 3:22 am | Reply nono
ဒီမှာပြင်ထားတာရော သူတို့တွေစားနေတာကြည့်ရင်ရော စားချင်စရာပဲ မမ နည်းပေးမှပဲ လုပ်စားလိုက်ဦးမယ် နာမည်ကြီးတဲ့ တော့ပုကီ ဟင်းချက်နည်းတွေကို ပုံနဲ့တကွတင်ပေးတာ ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်
on September 7, 2011 at 4:21 am | Reply chowutyee
on September 6, 2011 at 8:06 am | Reply Hmone gyi
Look so yummy and never tried it before so treat me🙂
on September 7, 2011 at 4:20 am | Reply chowutyee
ကိုယ်ကို အရင်ဆုံး ကျွေးတာပါ.. ဒီဇင်ဘာပြန်လာခဲ့ လုပ်ကျွေးမယ်…
on September 6, 2011 at 12:49 pm | Reply PhyuT
မမ၀တ်ရည် ပဲပြားလိတ်နဲ့ချက်တာ မဟုတ်ဖူး ၀ိုထန် နဲ့ ချက်တာ မမ၀တ်ရည်
၀ိုထန်ဆိုတာ ဒုတ်ချောင်းအရှည်ကြီးတွေနဲ့ထိုးပီး ပြုတ်ရောင်းတဲ့ ဒုတ်ထိုးပါ
ကိုရီးယားအသားပြား လို့လဲ ခေါ်ပါတယ် တခါမှ ကွန်မန်းမပေးပါဖူး phyut အခုလို ကွန်မန်းပေးသွားတာကိုလဲ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် မမ၀တ်ရည်
on September 7, 2011 at 4:12 am | Reply chowutyee
စိတ်ဆိုးပါဘူး ဖြူရယ်။ ကိုယ်မသိတာ သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါနော်… တော့ပူကီကို အရမ်းလုပ်စားချင်တာ။ အစက ဆန်ကိတ်လုပ်နည်းမသိလို့။ နောက်သိသွားမှ လုပ်စားဖြစ်တာ။ အသားပြားတွေတော့ လုပ်နည်း ရှာကြည့်ပြီ ပြန်ချက်ကြည့်အုန်းမယ်။ ၀တ်ရည်ကတော့ အမဲသားကို နှုတ်နှုတ်စဉ်းပြီ ကြော်ပြီ ထည့်စားတယ်။ နောက်လည်း ကွန်မက် ပေးပါ.. Thanks par ..🙂
on September 6, 2011 at 2:17 pm | Reply mgthant
ဘလော့ကို သိတာ အရမ်းကို နောက်ကျတယ်… ပထမဆုံး လာလည်သွာပါသည်။
on September 7, 2011 at 4:17 am | Reply chowutyee
လာလည်သွားတဲ့ ကိုမောင်သန့်ကို ကျေးဇူးးပါ.. နောက်လည်း လာလည်ပါအုန်း..:)
on September 7, 2011 at 4:01 am | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
ပျော်စရာကြီး ကိုးရီးယားသွားစရာမလိုဘဲ စားလို့ရတဲ့နည်း တွေ့ပြီ။
တော်ပြီ ကိုးရီးယားက ဂူဂျွန်ဖြိုးတို့ဆီ မသွားတော့ဘူး
ဝတ်ရည်ဆီဘဲ လာလည်တော့မယ် လုပ်ကျွေးနော်
on September 7, 2011 at 4:14 am | Reply chowutyee
ဟားဟား မချော အဲဒီအကြံကောင်းတယ်။ သူတို့ဆီသွားမနေနဲ့ ၀တ်ရည်ဆီပဲ လာလည်နော်။ ၀တ်ရည် ကိုရီးယား ဟင်းချက်နည်းတော်တော်များများ ချက်တတ်တယ်..😀
on September 7, 2011 at 4:17 am | Reply အန်တီတင့်
ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတိုင်းလိုလိုပါတဲ့ တော့ပူကီ လုပ်နည်းလေးသိသွားပြီ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ ဝတ်ရည်ရေ။
on September 7, 2011 at 4:18 am | Reply chowutyee
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါ …😀
on September 7, 2011 at 4:29 am | Reply PhyuT
ဟုတ် မမ၀တ်ရည် အမြဲလိုလို အမဘလော့လေးကို လာဖြစ်ပါတယ် ကွန်မန်းတော့ အခုမှ ပေးဖြစ်တာ အခုလို နိုင်ငံတကားအစားအစာအကုန်နီးပါးချက်တက်တဲ့ မမကို ပူဆာချင်လို့ပါ မြန်မာပြည်မှာတွန်းလှည်းလေးတွေနဲ့ မီးကင်းပီးရောင်းတဲ့ ကြက်ဥကင် စားချင်လို့ပါ မမရယ် အင်တာနက်မှာ ရှာတာလဲ မူးနေပီ မမသိရင် phyuT ကို ပြောပြပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
on September 14, 2011 at 9:47 am | Reply chowutyee
ဖြူ သိချင်တဲ့ ကြက်ဥကင် လုပ်နည်း ၀တ်ရည် မသိတာနဲ့။ ၀တ်ရည် ဟင်းချက်မိတ်ဆွေ မအိသက်ဆီက မေးခဲ့ပေးတာ။
-.ကြက်ဥကို အပ်နဲ့ ဖောက် အထဲက အနှစ်တွေကို ဆေးထိုးအပ်နဲ့ထုပ် ပြီးရင် ဆား ကြက်သားမုန့်soy sauce နဲ့ ခလောက်ပြီ ပြန်ထဲ့ ပြီရင် ကြက်ဥ လေးတွေကို tapeနဲ့ပိတ်၊ဗန်း တစ်ခု ထဲ့ ပြီး oven ထဲ မှာ ၇ မိနစ်လောက် ဖုတ်လိုက်ပါ ။ ပြီရင် ရေအေးထဲခန စိမ်ထားပြီး အခွံခွါ . ပြီမှတုတ်ထိုးပြီးမီးကင် အချဉ်ရေနဲ့ စား။
on September 11, 2011 at 3:49 am | Reply ma phoo
on September 15, 2011 at 8:28 am | Reply PhyuT
ma ma phoo က အရင်ကျေးဇူးတင်သွားပီး ဟီးဟီး ….ကျေးဇူးပါ မမ ၀တ်ရည် လုပ်စားဖြစ်တဲ့နေ့ ကောင်းသည် ဆိုးသည် အကြောင်းပြန်ပါမယ့်မမ
on September 24, 2011 at 5:43 am | Reply Xman_နတ်လူမုန်း
ဟာ ဆရာတွေနဲ့ တွေ့ပြီး
on September 29, 2011 at 6:13 am | Reply hanlay
on October 9, 2011 at 8:37 am | Reply jue
on October 10, 2011 at 6:17 am | Reply chowutyee
on October 10, 2011 at 12:57 pm | Reply zaid
မ၀တ်ရည် ရေ ကျွန်တော်သိချင်တာလေးရှိလို့ မေးပါရစေ။
ရပ်ကွက်တွေ နဲ့ နေရာအနှံ့မှာရောင်းတဲ့ ကိုရီးယားကင်တွေ လုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေကိုအရမ်းသိချင်ပါတယ်။ကြိုက်လည်းအရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်လုပ်စားချင်လို့ပါ။
for examplesးကြက်ဥကင်၊ ငါးဖယ်ချောင်း၊ ဂဏန်းလက်မ၊ အကင်စုံပေါ့ဗျာ…
ကျွန်တော့မေးလ်ဆီကိုကျေးဇူးပြု ပြီး ပို့ပေးပါခင်ဗျာ။
on October 11, 2011 at 3:48 pm | Reply chowutyee
ok I will !
on October 18, 2011 at 2:10 pm | Reply မှီ
ကျွန်မက အမြဲဝင်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အမနည်းနဲ့လည်း တော်တော် အဆင်ပြေလို့ ကျေးဇူးပါ။ တခုလောက်လေး မေးချင်လို့ပါ။ ကျွန်မလည်း ထမင်းကြော်မျိုးစုံ အင်တာနက်မှာ လိုက်ရှာတာ ရတဲ့ဟာလည်း ရပါတယ်။ အဏ္ဏ၀ါထမင်းကြော်(ပင်လယ်စာထမင်းကြော်) ကဖြင့် ရှာလို့ လုံးဝ မရလို့ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အမရယ် ပို့စ်တင်ပေးပါလား။ လေးစားစွာဖြင့်။
on October 22, 2011 at 2:52 am | Reply chowutyee
မှီရေ ကြိုးစားပြီ နောက်မှ ပင်လယ်စာထမင်းကြော် ချက်နည်းလေး တင်ပေးပါ့မယ်။ အားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်..😀
on November 29, 2011 at 12:07 pm | Reply A Hnin
ဟင်းချက်ဝါသနာပါ့ တဲ့သူတွေအတွက် အခုစိတ်ကူးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ စီစဉ်ပေးတဲ့
on May 14, 2012 at 2:10 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] September 5, 2011 ကိုရီးယား တော့ပူကီ […]
on June 19, 2014 at 5:00 am | Reply Precious
Wutyee Food House ပုံရိပ်များWutyee Food House Magazine ပုံရိပ်များ
”သူငယ်ချင်း” အချစ်ဝတ္တုရှည် ၀တ်ရည် နောက်ဆုံး ရေးထား ၀တ္တု Wutyee Food House Facebook Fan	Wutyee Food House Facebook Fan
ချက်ပြုတ်နည်းများ	-မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ (37)
ဂျပန်စတိုင် ချက်ပြုတ်နည်း (4)
တရုတ်ဟင်း ချက်ပြုတ်နည်း (48)
အဓိက ဟင်းလျာများ (43)
ထိုင်းဟင်းလျာ ချက်ပြုတ်နည်း (17)
ပီဇာ ဖုတ်နည်း (2)
ဗီယက်နမ် ချက်ပြုတ်နည်းများ (2)
လာအို ချက်ပြုတ်နည်းများ (1)
အင်ဒိုနီးရှား ချက်ပြုတ်နည်းများ (1)
အိန္ဒိယ ဟင်းလျာချက်ပြုတ်နည်း (16)
အနောက်တိုင်း ချက်ြ့ပုတ်နည်း (33)
အမေရိကန် ချက်ပြုတ်နည်းများ (2)
အခြား အကြောင်းအရာများ (2)
စာရေးသူ chowutyeeဟင်းအသစ်တင်တိုင်း သိနိုင်ရန် Email Subscription လုပ်ပါ
လာလည်ကြသူများ	1,054,321 လာလည်သူများ	အကြည့်များဆုံး ဟင်းလျာများ	ချက်ပြုတ်နည်းများ	ကြက်ဆီထမင်း	အာလူး ပူတီ၊ ချာပတီ	ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါး (အိုးဘဲဥ)	တရုတ် ခေါက်ဆွဲကြော်	အီကြာကွေ အစားသွပ်ကြော်	ကြက်သား ပလာတာ	နှစ်သစ်အမှတ်တရ ဟင်းရွက်စုံခေါက်ဆွဲကြော်	တို့ဟူးသုပ်လေး လုပ်စားကြအောင်	၀တ်ရည် မီးဖိုချောင်	Archives	Archives
မှတ်ချက်များ	Nyan on အိမ်လုပ် ပဲပြုတ်May Phyo on ပုဇွန်ထုတ်ကြော်Ei lay on ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါး (အိုးဘဲဥ)Fu Eiei on ကြက်ဆီထမင်းsun on ပန်းသေးခေါက်ဆွဲကြော်sun on ပန်းသေးခေါက်ဆွဲကြော်	ကြိုက်နှစ်သက်မည့် ဘလောက်လေးများ
-ဂျူးလိယက်ရဲ့ ၀တ္တုများ စုစည်းရာ
မလုလုရဲ့ မေတ္တာရပ်ဝန်း မီးဖိုချောင်
နွေးနေခြည် ရဲ့ မှတ်စုတို
My Favourite Place in Little Pigeonhole
my kitchen my life